नयाँ खेल बजार आरपीजी। अपेक्षित र समीक्षा गरेर न्याय, ट्रेलर सफाइ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू बस bestiary मोहित। तर सामान्य मा, म पूर्ण नयाँ कुरा थियो। तर गरेको हामी के सामना गरौं।
खेल यस वर्ष मे मा जारी भएको थियो। न्यूनतम: 2.2 को एक आवृत्ति संग कोर प्रोसेसर; राम को2GIG र एक भिडियो कार्ड GeForce 8800 GT वा Radeon HD 4830।
ज्वाला कस्तो बाध्य छ, हामी यसलाई र बित्दै जाँदा समीक्षा - यो सबै तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ।
कहानी मा, मुख्य पात्र दुई सिद्धान्तहरू विरोध गर्छन्। यसको - वीर र प्रेरित - शैतानिक। अक्सर दोस्रो अभ्यास उपयोगी साबित, तर जो चयन गर्न बाटो, सबैलाई आफूलाई निर्णय गर्छ।
त्यसैले, विश्व ज्वाला द्वारा बाध्य छ। समीक्षा र बित्दै जाँदा सुझाव।
के तपाईं "शुद्ध" सिपाही, स्काउट वा mage प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। वा दुई वा तीन संयोजन। भविष्यको लागि - लिएर आक्रमण पछि स्तर बेहतर छ। त्यसैले हुनत सुरुमा ढिलो Deathplate "टिन" सबै बाधा हुनेछ, राम्रो RANGER वा Pyromancer छ।
हामी, रूसी मा ज्वाला द्वारा बाध्य प्ले लिजेन्ड आफ्नो नाम त - ज्वालामुखी। आफ्नो विकल्प संग चिन्ता हुँदैन। सुरुमा, प्रशिक्षण गर्ने undead वध हुनेछ। सिक्न निम्न कुञ्जीहरू:
ठाउँ - लक;
जे - ढाल गर्न लात;
2 - क्रसबो।
ठीक छ, पहिलो अनुभव सफल भएको थियो।
के तपाईं "Skyrim" को परिचित फारम हो भने हराएको छैन। त्यसैले, एक विशाल राक्षस सबै मन्दिरमा धक्का। गुप्त भूत निरन्तर यहाँ प्रकट छ, त्यसैले हामी मात्र पहिलो स्त्रिहरु मार्न।
प्रक्रिया तपाईं Nipomo सिक्न हुनेछ - भैंसी। उहाँले खोज दिनेछु - "। पूर्व भाग को अध्ययन" कार्य को भूमि तल राक्षस फेद छ मा, कोठा मा मात्र कुरा हो, एकदम सजिलो थियो। गुप्त कि उहाँले अगाडि leans र आफ्नो काँध बाहिर sticks गर्दा क्षणमा एक जोडी एक पंच लाइन संग बन्द चलाउन, पायो अन्यथा कुनै एकाइ सुरक्षित हुनेछ। Bound मा ज्वाला Cheats द्वारा penetrated एकै समयमा यदि तपाईं एक शाखा स्काउट प्ले आवश्यक छैन।
"को गोठ मा गोरिल्ला"
तपाईं चर्च सबैलाई चलाए जो दानव, सम्झना गर्छन्? चाँडै हामी फेरि उसलाई भेट्न हुनेछ। पम्पिंग तेस्रो शाखा - र गर्दा जादुई कौशल प्राप्त गर्न सक्छन्।
हामी undead आक्रमण बाट witches रक्षा गर्न आवश्यक हुनेछ। यो कार्य सरल छ, अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई फरक छैन। अधिक महत्वपूर्ण कुरा, रातो जादूगर्नी मदत।
Fireballs र आगो क्षति एउटा तरवार - विजेता भएपछि आनन्दित कौशल पाए। तथापि, पहिलो हामी निकट भविष्यमा धेरै उपयोगी, आउँदै राक्षस रूपमा, एक गोरिल्ला जस्तै थिए।
युद्धभूमिमा - 99% जो को miniboss लिन्छ एक सानो ploschadochka। यसलाई विभिन्न कोण बाट सधैं skeletons चढ्नु हुनेछ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तिनीहरू धेरै ध्यान छैन। मुख्य कार्य - यो बाँदर-undead को खुट्टा मा मात्र काठ पैड। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्, ज्वाला द्वारा बाध्य भएको बित्दै जाँदा खेल विकासकर्ताहरूले चाल धेरै संग fraught छ।
सरल रणनीति। हामी राक्षस नजिक बन्न आवश्यक र आफ्नो हात र खुट्टामा pounding। तर, यो भूमि मा smashes, त्यसैले भेला थियो कि सबै औषधि आवश्यक छ।
हामीले दरार थियो जब एल्फ मदत गर्नेछ। र को लागि भलाइ धन्यवाद। कहिल्यै भन्दा लेट राम्रो! तिनीहरूले अर्को शहर एउटा सानो साथी हामीलाई छन्। swamps को बीचमा कहीं, यो साझेदार को विकल्प प्रस्ताव गरिनेछ। एक जादूगर लिनुहोस्। यो मात्र राम्रो शत्रुहरू फेंकता छ Fireballs संग, तर पनि protagonist व्यवहार गर्नुहुन्छ।
एकाइ आफ्नो आक्रमणबाट बेकारी छ रूपमा शहर सबैभन्दा खतरनाक शत्रुहरूलाई बाटोमा spiders छन्। हामी पनि जो पछि साझेदार बन्न सक्छ, Rendvela बचत गर्नुहोस्।
त्यसैले, पुल दुई बैरल छन् तुरुन्तै पछि, तिनीहरूले साना कुराहरू छन्। अर्को - एक लोहार। तपाईं एक बिट बन्द बेच्न र उपयोगी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामी त पछि हामीलाई Manor मेयर, व्यापारी संग कुरा। अर्को स्टप छ।
ज्वाला द्वारा बाध्य खेलको मापन तरिका मा खेल चरणको समायोजित हुन्छ। मात्र कुरा यो राक्षस को एक स्थायी बहाली रिस उठाउँछ भनेर। को protagonist को swamps मा राक्षस को खोज लिएर पछि शैतानिक एकाइ को उपस्थिति मा आफूलाई भेट्टाउनुहुन्छ। तर यो अहिले त महत्त्वपूर्ण। प्रमुख को वार्डेन संग कुरा पछि, तपाईं तल छिंडीमा जाने र बिक्रेता अर्को बक्स खोजी हुनुपर्छ, कि छ।
प्रारम्भिक चरणमा गाउँमा सबै उपलब्ध तीन कार्यहरू हुनेछ। मुख्य - यो प्राणी र दुई पक्ष, वैकल्पिक मा।
अर्को स्टप - मेसन, मादक पदार्थ सेवन गेट मा। प्रक्रिया मा हामी आफ्नो काम गर्न यो क्यारेक्टर मध्ये एक छ कि सिक्न र अझै र ठूलो बन्चरो प्राप्त।
को marshes को लडाई
शहर बाहिर forays अघि यो पक्ष खोजहरू सबै प्रदर्शन र अधिकतम सुसज्जित गर्न सिफारिस गरिएको छ। किन? बस spiders (यी सिमसार बासिन्दाहरू सम्झना?) सुधार भएको छ। तिनीहरूले अब धेरै टाढाबाट देखि thorns थुक्नु गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र फाइदा - यो उछाल देखि ब्लक बन्द गर्न सम्भव छ। टिप: यदि तपाईं एक योद्धा प्ले अक्सर, व्यापक हडतालहरू हरायो। त्यसैले तपाईं तीन राक्षस को एक जोडी एक पटक क्षति सम्झौता, र तिनीहरूले समूहमा देखिन्छन्।
तुरुन्तै कार्य गर्न हतार सल्लाह छैन, र राक्षस द्वारा दलदल बाहिर सफा। बिना राम्रो कौशल तंग हुनेछ यो कम्तिमा नै स्तर रूपमा उठाउनु हुनेछ।
त्यसैले, कतै मार्कर2को वरपर मा, दायाँ छेउमा जान तीन corpses सामना गर्यो। हामी सबैलाई खोज। यो काम को लागि आवश्यक छ।
धेरै अवस्थामा ज्वाला बाँधिएका एक योद्धा को खण्ड अक्सर उपयोगी हुनेछ Cheats। तर पुरानो योद्धाहरू सजिलो तरिका देख छैन!
अर्को धेरै दलदल राक्षस हुनेछ। गुप्त तपाईं सह-कार्यकर्ता नजिक रहन आवश्यक छ। यो एक व्यवहार हुनेछ। जमीन बाहिर spikes चढती जब यो राक्षस, एक झटका छ। तिनीहरूले धेरै गाह्रो मारा, त्यसैले उपचार लागि औषधि पर्याप्त नहुन सक्छ।
त्यहाँ एक विकल्प हुनेछ। Nekromantshu को बोटहरू देखि जारी गर्न सकिन्छ, र तपाईं छोड्न सक्नुहुन्छ। मद्दत भने - हामी साझेदार परिवर्तन हुनेछ। जादूगर्नी मृत Beats बलियो, तर निको छैन। यस मंच पहिलो magichka छोडेर सुझाव दिन्छौं।
थप ज्वाला द्वारा बाध्य खेल जटिल। कोड खैर यहाँ हुनेछ, तर हामी तिनीहरूलाई बिना गर्नेछ। बाटो साथ तपाईं एक सहायक Rendvela सैनिक लिन सक्नेछन्। तुरुन्त यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यो चरण मा, यो थप शक्तिशाली तपाईं भन्दा छ।
marshes मा यात्रा, यो गुफा गर्न प्रवेश चलान। शैतानिक शक्ति प्रयोग गर्न वा प्रतिरोध गर्न - एक विकल्प हुनेछ।
तपाईं छनौट भने, Valvenor फर्कनुहोस्। हामी गाढा सेना भित्र को प्रभाव हामीलाई सुरक्षित हुनेछ कि डाक्टर औषधि देखि लिनु आवश्यक छ। खैर, छैन डाक्टर टाढा दारी एक योद्धा छ। उहाँले उत्तरार्द्ध खन्नु यदि Rendvelu एउटा उत्कृष्ट वैकल्पिक हुनेछ।
त्यहाँ बिल्कुल आफ्नो क्षमता मा विश्वास क्षति सामना गर्न भने रातो lekarshu लिन मौका छ।
Whisper गरेको मांद त्यसैले। त्यहाँ दुई दिग्गज छन्। एक पटक तपाईंले तिनीहरूलाई मार्न - यो तुरुन्तै बाउन्स महत्त्वपूर्ण छ। मृत्यु पछि, तिनीहरूले बम परिणत।
यो तहखाने को हाकिम - Tormentor। Artful, शक्तिशाली पर्याप्त राक्षस। टाढा यो धेरै गाह्रो छैन संग, यो जादु उहाँले एकदम thrashes कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा खतरनाक झटका बिजुली। तसर्थ, बित्तिकै राक्षस जम्छ र कताई हात रूपमा, बन्द कुनै पनि दिशा मा चलाउनुहोस्। आरोप तपाईं यस अगाडि खडा छन् जहाँ ठाउँमा उड हुनेछ।
पहिलो अध्याय को finale
खुसी, नगर Valvenor फिर्ता, तथापि, यति सरल छ! केहि गाउँमा संग fishy। को undead गल्लीहरूमा मार्फत Strolling, नागरिकहरु छैन देखिने छन्। के गर्ने?
हामी गाउँमा प्राचीन गर्न सम्पत्ति मार्फत तोड्न। खोजहरू भाडामा लिने, सामान्य लाश सिक्न। यो जो केन्द्रिय वर्ग मा खडा यस्तो विशाल कंकाल छ।
अहिलेसम्म उपलब्ध छन् ज्वाला कोड द्वारा बाध्य मा, अब trainers लागू हुन्छ। तर हामी इमानदार जाने!
यसलाई अझ राम्रो संरक्षित गरिएको छ। नष्ट यो धेरै कठिन हुनेछ। हामी सबै विकल्प र चिसो को स्तर आनन्द छ। यो सामान्य को मुख्य प्रभाव - जमीन देखि बरफ shards। तिनीहरूले त्यो टिकटहरु आफ्नो खुट्टा रूपमा बित्तिकै चढती।
एकदम कष्टप्रद क्षमता राक्षस। को heathens मार्न। अर्को, हामी elven राजकुमार कुरा र steppes मा आफूलाई पाउन।
यो अध्याय को शुरुवात एक धेरै लामो कुराकानी द्वारा मार्क गरिनेछ। खेल खण्डमा यस्तो गेय digressions गर्न अवरोध, विशेष गरी यदि ज्वाला द्वारा बाध्य।
जाडो र आसपास हिउँ र हिट राक्षस शरीर exploding बरफ हिप स्थिर। सामान्य मा, साँझ अब languid थियो। को घाटी को अन्त मा कालो Kalardas फेला पार्न र इनपुट शुरू lich। तर हामी मात्र उपनगर प्राप्त गर्नुहोस्।
थप हाम्रो बाटो हामी छत प्राप्त जो मार्फत पुस्तकालयमा निहित। चार तरवार संग आइस शिव - यहाँ miniboss पर्खिरहेको।
धेरै मोब्स थप ज्वाला बाँधिएका मा बारम्बार। त्यसैले खण्डमा leveling द्वारा, तर पनि रणनीति खेलाडी विकास मार्फत मात्र होइन facilitated।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प Fireballs हुन, तर तपाईं स्वयं गर्न सक्छन्। हामी उपचार गर्दै छन्, पिटे, चलाउन - चाल सरल छ। त्यहाँ सल्लाह को केवल एक टुक्रा छ। यो भूमि अन्तर्गत देखि बरफ spikes छ कि undead को सामान्य, जस्तै क्षमता छ।
यो झटका अघि, त्यो एक शीर्ष जस्तै स्पिन गर्न थाल्छ। सिर्जना समय छैन भने, यो पक्ष बाहिर फिर्ता चलाउन राम्रो छ, तपाईं अवरोध गर्न चाहनुहुन्छ spells वा।
एक पटक शहर मा, सबै को पहिलो, साझेदार लिन तपाईं घाटी मा मदत जसलाई Lich।
यहाँ, को steppes मा, एकदम गम्भीर अवस्था प्ले। यो शहर कब्जा छ बाहिर जान्छ, र हाम्रो elvish राजकुमार उहाँलाई जारी गर्न बल बटोरता।
प्रक्रिया हामी हाम्रो बाँध्न त्यहाँ एक देशद्रोही हो भनेर जान्न। तर तिनीहरूले भन्न रूपमा, चोर बन्द टोपी गर्न। कप्तान नै अभिनय। पराजित भएपछि उहाँलाई शहर जान आवश्यक छ।
अर्को, फेरि विकल्प प्रदर्शित छ। हामी राम्रो वा शक्तिहरू छेउमा लडिरहेका छन्। को elves को कैदीहरूलाई जारी गर्न आवश्यक निर्देशन। हामीलाई necromancer र तीरंदाज दिन मद्दत गर्न। तर शहर को गेट पछि, हामी एक विशाल बहु खट्टे हेर्नुहोस्। यो Concubine मास्टर।
त्यसैले, विकल्प बलिदान रूपमा hostages ल्याउन वा सुरक्षित छ। तपाईं nobly कार्य गर्ने निर्णय भने, उम्कन nekromantsha र शूटर मदत गर्नेछ।
मा ज्वाला द्वारा बाध्य अचानक मोड। मा खण्डमा पनि जादूगर्नी मृत सम्बन्धित एक सानो आश्चर्य दिनुहोस्।
चिसो र पहिले नै परिचित spiked खुट्टा समान Miniboss आक्रमण। त्यो धेरै बसोबास देखि बस, हत्या, तर लामो समय। विशेष गरी यो महत्वपूर्ण क्षति फायर लागू गरिन्छ।
को arthropod को परिसमापन पछि, आफूलाई काला Rime देखिन्छ। तेस्रो अध्याय को मालिक। नडराऊ, यो सिर्फ एक प्रस्तुति हो। बित्तिकै आफ्नो जीवनको पाँचौं भागमा क्षति को कारण रूपमा, undead गायब।
कालो Rime पर्खाइ
तुरुन्तै पछि नायक को नेता को लापता भएको नाली सामना। शायद संग शिविरमा हाम्रो बाटो बनाउन। यो respite समयमा कडा तपाईं आवश्यक सबै संग शेयर र अधिकतम सुधार गर्न सिफारिस गरिएको छ। बस Pyromancer बित्यो।
तपाईं एक्लै यात्रा हुनेछ गर्दा, कठिनाइको छैन बचा गर्न सकिन्छ। शिव र प्रमुखहरूलाई यहाँ मूल देखि भने undead। तपाईं फेरि lich पूरा गर्दा सजिलो हुन्छ।
शिविरमा मा व्यापारीहरु फर्केपछि र कैदीहरूलाई जारी गर्न क्वेस्टको प्राप्त गरेपछि, यसलाई कुराहरू ध्यान हुन आवश्यक छ। अब कुलीन हतियार गिर गर्न थाल्छन्। सबै भन्दा राम्रो सबै उपकरण सुधार निरन्तर, साथै, चयन गर्नुहोस्। निरन्तर ज्वाला द्वारा बाध्य खेल मा यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्। तपाइँको को खण्ड, त्यसैले धेरै सजिलो।
नजिकै यो अक्सर पुनर्स्थापना तपाईं रातो-haired sorceress जारी गर्दा, कि शिव undead सम्झना।
Concubines नजिकै पिटे, र एक मात्र concentrating। यो के कुरा छैन। तपाईं पहिलो बहु खट्टे जीत भने, चाँडै मर्न दोस्रो।
आइस को गाढा प्रभु
अर्को अझै पनि जोडी concubines र वृहत खण्डमा हुनेछ। आफ्नो ठूलो खण्डमा अफ्ठ्यारो त्यहाँ, बस नजिक रहन र जादू पिटे नदेऊ।
हामीलाई Lich र तीर सामेल अघि मुख्य स्तर मालिक गर्न प्रवेश। तथापि, ती नेता संग लडाई नै सानो प्रयोग हुनेछ। तर ज्वाला कोड बाँधिएका रोकियो छैन यहाँ हुन! आखिर, सबै अवरोधहरू पार र Ineyu गर्न पतन हुनेछ जब, पसिना हुनेछ।
यसलाई आफ्नो शाखा, तीन वर्ण परिणत हुनेछ प्रत्येक। यसलाई तुरुन्तै दुई मार मिनेट मार्फत बाँकी एक पछि स्काउट नष्ट सिफारिस गरिएको। उत्तरार्द्ध औषधि आपूर्ति को अन्त मा निर्मूल गरिनेछ।
त्यो लामो-प्रतीक्षा अन्तिम हो। ज्वाला बाँधिएका मा राक्षस को सेनाले spawn कारण, एकदम ढिला पारित। अब हामी आफ्नो अहम् संग टकराव छ। शैतानिक सार, खेल को पाठ्यक्रम नै प्रकट, अन्तमा व्यक्ति छ।
, स्वास्थ्य र मानयो सुधारना गर्न क्रसबो बोल्ट अधिकतम संख्या खरिद लड्न औषधि। एक दूरी मार बोल्ट तिनीहरूलाई उसलाई लोभ्याउन गर्न, बारुद राख्नु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
उहाँले बिजुली बलमा डियाब्लो जस्तै, र बन्द दायरा पिटाई तरवार शुट। समय समयमा, यो ड्रागन मद्दत गर्छ। को सरसृप गुजर गर्दा मात्र यसमा concentrating। यो बिन्दुमा भूत invulnerable छ।
अर्को जो बाटो जाने अन्तिम विकल्प हुनेछ। प्रकाश शक्तिहरू सडक भने, protagonist आफूलाई भाला संग, बल्ल अन्धकार नष्ट गर्न मार्न।
अब, यस्तै अन्त्य पछि, मुख्य प्रश्न चाहे त्यो ज्वाला2द्वारा बाध्य हुनेछ छ?
समस्या को अन्तिम समाधान गर्न दार्शनिक दृष्टिकोण हामीलाई सम्भव रोचक लडी आशा गर्न अनुमति दिन्छ।
शुभकामना छ, सज्जनहरु adventurers!
Guilds युद्ध 2: खेल समीक्षा सुविधाहरू
तपाईं उहाँले सबै मनपराएका एक उपनाम साथ आउन सक्छन् बारेमा
साहस - omnipotence र permissiveness एक राज्य। साहस बारेमा सबै
भिटामिन "Selmevit": डाक्टर, संरचना, मूल्य, फोटो को समीक्षा
पारित नतीजा 4: "मास फ्युजन"
"टी-43"। ट्यांक को विश्व: «टी-43" समीक्षा। "टी-43": फोटो
Apprendre: को क्रिया समूह III को conjugation